X ကိုလွင့်မျောနေသော (X Drifting) - 2Game
စူပါလက်တွေ့ကျကျ 3D ဂိမ်းမျက်နှာပြင်ကိုသင်ပျံ့၏အမြင်အာရုံထိခိုက်မှုမျောပြီးပြည့်စုံသောကားကိုပေးသည်!
စတီယာရင်ဘီး Turn နှင့်ထောင့်မှာသင့်ရဲ့ပျံ့ဒဏ္ဍာရီပြီးအောင်! 🚗
သုံးဂိမ်းသည် Modes: ရှင်သန်မှု mode ကို, နယ်ပယ်တွင် mode ကို, နှင့်အချိန်စိန်ခေါ်မှု mode ကို။
ရှင်သန်မှုမုဒ်: သင်ကဒီဂိမ်းကိုဆက်လက်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်းသတ်မှတ်ထားသောစစ်ဆေးရေးဂိတ်ရောက်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ရောက်ရှိသောအခါ, အချိန်သုညအထိသင်အချိန်ကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်, သင်သည်ပျံ့အချိန်အညီဆုခခြဲ့ပါလိမ့်မည်။
Arena mode ကို: လက်စွပ်အားကစားကွင်း၌, ကားမောင်းတဲ့ကားအချိန်အပိုင်းအခြားအချို့ကာလအတွင်းတစ်ဦးကိုကျပန်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာရောက်ရှိ;
အချိန်စိန်ခေါ်မှုမုဒ်: သင်ကတူညီတဲ့လမ်းကြောင်း2သောက်ဖြည့်စွက်, သင်၏နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ရလဒ်အဘို့အမြန်ဆုံးရင်ခွင်အချိန်ယူဖို့လိုအပ်;
သငျသညျရှေးခယျြဖို့အတှကျ 12 ထိပ်တန်းအဆင့်ချီတက်ပွဲကားများစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုကားတစ်စီးအစွမ်းထက် Off-လမ်းတာယာများနှင့်လိပ်အိတ်များအပါအဝင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့အသွင်အပြင်ရှိသည်။ ပြိုင်ကားများလေးမျိုး attribute: အမြန်နှုန်း, ပျံ့, torque, တာယာ, ကားပိုမိုလွယ်ကူစွာ, အိမ်ခြံမြေမြင့်မားလယ်ပြင်ပေါ်မှာအချို့သောအစွန်းရောက်ပျံ့ဖြည့်စွက်နိုင်ပါတယ်;
6 ထူးခြားတဲ့လမ်းကြောင်း:3လမ်းကြောင်းကွင်း,3တောင်ကြီးတောင်ငယ်လမ်းကြောင်း, ရာသီဥတု, နေသာရက်, မိုးရာသီရက်နှင့်ဆီးနှင်းရက်ပေါင်း3အမျိုးအစားများ။ တစ်ခုချင်းစီကိုခြေရာခံသင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးရမှတ်မှတ်တမ်းတင်လိမ့်မယ်, သင်တစ်ဦးချင်းစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ဂိမ်းပြန်လုပ်နှင့်အဆက်မပြတ်လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်သင်၏ရမှတ် refresh နိုင်ပါတယ်;
အဘယ်သူမျှမ Wi-Fi မရှိပြဿနာ, အချိန်မရွေး, နေရာမရွေးကစားချင်တယ်, အချိန်နှင့်ပထဝီကန့်သတ်ခြင်းမရှိ။ အားလုံး3Modes သာနဲ့6ပုဒ်အော့ဖ်လိုင်းစိန်ခေါ်မှုများကိုထောကျပံ့။
X-နစ်ယခု Download နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ပျံ့ဒဏ္ဍာရီအစွန်းရောက်ပျံ့ခံစားချက်ကိုခံစားဖန်တီး!
Android အတွက် X ကိုလွင့်မျောနေသော (X Drifting) အလွန်ရေပန်းစားသည်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဂိမ်းကစားထောင်ပေါင်းများစွာ၏မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမပါဘဲရဖို့အတှကျဝမျးသာပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်ကူညီနိုငျပါသညျ! အခမဲ့ဂိမ်းကို download လုပ်ပါရန်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သောဖိုင်ကိုရွေးသင် file ကိုရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ X ကိုလွင့်မျောနေသော (X Drifting) apk download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှငျ့သငျတက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်းများအတွက်ဂိမ်းအပြည့်အဝဗားရှင်းခံစားကြသည်! မိုဘိုင်းဂိမ်းကိုခံစားဖို့အကောင်းဆုံး gadgets တစ်ခုမှာ iPhone ကိုဖြစ်ပါသည်, X ကိုလွင့်မျောနေသော (X Drifting) iOS အတွက်ထိပ်တန်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုငွေပေးချေခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်ကစားရန်သင့်ကိုကူညီနိုငျပါသညျ! iPhone အတွက် X ကိုလွင့်မျောနေသော (X Drifting) ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိရိယာ၏မော်ဒယ်ကို select ရန်သင့်အားအကြံပြု, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ကအသင့်တော်ဆုံးဂိမ်း app များကိုရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သော .ipa ဖိုင်ကိုရွေးသင်ကစားပွဲရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ X ကိုလွင့်မျောနေသော (X Drifting) ကို download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှင့်သင်အိုင်ပက်သို့မဟုတ်, iPod တို့အတွက် X ကိုလွင့်မျောနေသော (X Drifting) ခံစားနေကြသည်။ ထိုအသတိရ! ကျနော်တို့နေ့စဉ်အခမဲ့ IPA ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကို update ဒါညှိနေဖို့!